विकू सहकारीको कोल्हुवा सेवा केन्द्र उद्घाटनसँगै सुरु भयो एकीकृत सेवा (भिडियोसहित)
| २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १५:३३ , प्रकाशीत
मध्यविन्दु, २७ जेठ । नवलपरासी (ब.सु.पू.) को मध्यविन्दु नगरपालिका–३, चौराहाचोक, कोल्हुवामा विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अर्को सेवा केन्द्र थपिएको छ । शुक्रबार एक समारोहबीच मध्यविन्दु–३ का वडाध्यक्ष मानबहादुर महतोले कोल्हुवा सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो । सेवा केन्द्र उद्घाटनसँगै एकीकृत सेवा सुरु भएको छ ।
उद्घाटनपछि मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रमुख अतिथि महतोले २०४८ सालदेखि आजसम्म निरन्तर सेवा बिस्तार गर्नु चानचुने काम नभएको बताउनुभयो । विकूले जनताको मन, मस्तिष्कमा रहेर अझ राम्रो काम गर्न सकोस् भनी उहाँले शुभकामना दिनुभयो । उहाँले वडाको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग र सहकार्यका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
सेवा केन्द्र उद्घाटन समारोह विकू सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । अध्यक्ष सापकोटाले सदस्यलाई खुसी बनाएर, उनीहरुलाई लाभान्वित बनाएर आफूहरुले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकासित मिलेर काम गर्न विकू सधैँ तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।
विकू बचत तथा ऋण सहकारीको गैँडाकोट नगरपालिका–८, विजयनगरमा केन्द्रीय कार्यालय छ । नवलपरासी (ब.सु.पू.) मा विकूका कोल्हुवासहित २० वटा र छिमेकी जिल्ला चितवनमा ३ वटा सेवा केन्द्रहरु छन् । केन्द्रीय कार्यालय र सेवा केन्द्रहरुबाट विकूले एटीएम, एसएमएस, स्मार्ट बैंकिङ र क्युआर कोड प्रविधिबाट ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ ।